Guddi dhalin-yaro ayaan ku jiraa | Vaikuttajan reittikartta
Guddi dhalin-yaro ayaan ku jiraa
Guddiyada dhalinyarta ayaa ah kuwa siyaasad iyo diin ahaan ah kooxyo dhalin yar oo caadi ka ah. Waxaa badanaaba lagu doortaa doorashooyinka kasoo dadka dhalin yarta ay badanaaba u helaan fursad ay ku codeeyaan. Degmooyin qaarkood waa suurto gal in la helo kursi guddi dhalin yar ayada oo aan doorashooyin la qaban.
Si musharax aad u orodo oo aad xubin guddi dhalin yar aad u noqonto uma baahnid aan tahay qabiiri siyaasi. Waxa kaliya ee kugu filan haddii aad daneyneysid daryeelka dadka da’ yarta ee degmadaada. Haddii aadan ogeyn in degmadaada uu ka jiro guddi dhalin yaro iyo in kale ama sida loo doorto, weydii wakiilada mata ee guddiyada ardayda, maclimiinta ama tawabaraha dhalin yarta. Sidoo kale waxaad heli kartaa macluumaad ku saabsan guddiyada dhalin yarta iyo sida loo dhiseyba oo aad ka heli karto bogga internetka ee degmadaada.
Haddii aad horeyba qeyb uga ahayd guddi dhalin yaro oo aad dooneysid in aad wada shaqeysaan sida guddiyo dhalin yaro ee degmadaada, Guddiyada Dhalin-yarada Middowga Finnish (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry) ayaa ku caawin karo.